३ दिनपछि बिहे गर्न लागेका युवकलाई गु, ण्डाहरुले अ, x प, ह, र, ण गरेर गु, x प्तां, ग नै का, x टि, दिए – Dainik Sangalo
३ दिनपछि बिहे गर्न लागेका युवकलाई गु, ण्डाहरुले अ, x प, ह, र, ण गरेर गु, x प्तां, ग नै का, x टि, दिए
December 5, 2020 923
काडमाडौं। २ साथीहरुबीच पैसाको लेनदेनका विषयमा विवाद बढेपछि एक युवकलाई गु, ण्डाहरुले अ, x प, ह, रण गरेर जंगलमा लगेर उनको गु, x प्तां, ग नै का, x टि, दि, एका छन् । ती युवकको बिहे हुँदै थियो । बिहेको ३ दिनअघि उनको गु,. x प्तां, ग का, x टि, एको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । यो ग, x म्भी,र घ, टना उत्तर प्रदेशको बागपत जिल्लाको भएको बताइएको छ ।
पी, x डि, त युवकका साथीले नै अन्य २ जनालाई साथमा लिएर उनलाई ब, x न्ध, क बनाएको र उनको गु, x प्तां, ग का, x टि, दि, एको समाचारमा जनाइएको छ । उनलाई घा, x इ, ते हालतमा छाडेर अ, x प, ह, र, णका, रीहरु फ, रा, र भएका थिए । अहिले पीडित युवकको स्थिति निकै ग, x म्भी, र भएको बताइएको छ । उनलाई उपचारको लागि हायर सेन्टर रिफर गरिएको छ ।
पी, x डित समीर नामका युवकको आफ्ना साथी परवेजसँग १ लाख रुपैयाँलाई लिएर वि, x वाद थियो । पी, x डित समीरका अनुसार उनीकहाँ उनका साथी परवेजको नाम लिएर २ जना आएका थिए । उनीहरुले आफूलाई पैसा दिन द, बाब बनाएको समीरको आरोप छ । समीरले तत्काल पैसा दिन न, सक्ने बताएपछि ती दुई जनाले ज, x ब, र ज, x स्ती समीरलाई लिएर जंगलमा गएर उनको गु, x प्तां, ग का, x टि, दि, एका थिए । समीरले यसको जानकारी जसोतसो आफ्ना परिवारलाई दिए । परिवारले उनलाई ग, x म्भी, र हालतमा अस्पताल लगेका थिए । जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरुका अनुसार उनको स्थिति अ, त्य, न्तै चि, x न्ता, ज, नक छ ।
Prevपेङगोङ तालमा भारतीय सेनाको ठुलो झड्का, चिनियाँ सेनाले यसरी बढायो गस्ती
Nextबडिगार्ड तै, नाथ गरेर बिहे गर्दै श्वेता खड्का, मिडियालाई फोटो /भिडियो खिच्न नि, षेध ?(हेर्नुहोस भिडियो)
खुसीको खबर : अब चोरी गरिएका मोबाईलहरु नेपालमा नचल्ने